BadeBOTTI.CH – ebe ọ bụ na ndị mbụ Switzerland 2004 | si CHF 1699.- nke a mmefu ego na-ekewaghị ekewa – BadeBOTTI.CH mbụ Switzerland na-ekpo ọkụ tubs sawụna ubi gazebo – Hot tub N'èzí sawụna Jacuzzi – Ezumike na ntụrụndụ n'ụlọ – Badefass – Gartensauna – Gazebo ejiri mee
Ezigbo Wellness Enyi
The Hot tub; A ebube mmetụta n'ihi na ahu na mkpụrụ obi … nile n'afọ …
Baden n'otu oge na-enwe ọhụrụ ikuku na mmiri ọkụ na-emeghe ikuku na.
Ihe dị iche na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ bụ a pụrụ iche obi ụtọ. Dieses Erlebnis wird durch sprudelndes Wasser und Massage noch verstärkt.
Gbọmgbọm sawụna;Ezumike na ntụrụndụ dị mma na a onwe ikuku n'ụlọ …
The ahụkebe udi i nwere ike na-enweta mbụ na klas kwes karịsịa – Kọmpat akụkụ ka sawụna ka fọrọ nke nta n'ebe niile dị. N'èzí ụlọ kit ruo ogologo ndụ na ọṅụ dị ukwuu mere.
The BBQ obi / imi ihe ụlọ; Zuru okè mgbakwunye gị ubi …
Nọdụ ala ọnụ na ezinụlọ na ndị enyi, na-esi nri, grillieren, achị ọchị ma na-akparị ụka ahụ Morning etịbede. The Grịl House bụ ezigbo okpomọkụ Pavilion – The Anụ Mmịkpọ obi n'ụzọ zuru ezu gwara mmanụ ọla nile oge.
Otu ulo oru mbo ga-eme ka ị ọtụtụ afọ nke obi ụtọ!
Anyị na ngwaahịa ndị dị na ndị na-esonụ osisi umu (Ahịa dị iche):
Anyị ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ – Na-arịọ maka anyị CHF / EUR / USD Ahịa List.
(42,662 Ndị nleta na-anya a post)
18 thoughts on “Na-anabata gị”
26. May 2014 na 15:22
Biko tinye ndepụta ọnụahịa maka obere ọkụ tubs.
Ọ bụrụ na o kwere omume na-enweghị n'ekwú, ije ozi dị ka ọdọ mmiri emikpu.
Ọ bụ n'ebe ahụ nnweta na Austria?
26. May 2014 na 15:50
Daalụ maka ajụjụ gị. Anyị nwere oval emikpu ọdọ mmiri (LxBxH 100x80x100cm) ma ọ bụ gburugburu Hot Tubs ọkọlọtọ e si 160cm n'obosara. N'ezie, ị pụrụ ịzụta iche iche na ndị na-ekpo ọkụ tub na anyị. Ọ bụrụ na ị na mgbe e mesịrị mkpa a osisi ọkụ stovu ma ọ bụ electric okpomọkụ, Ị pụrụ ịzụta a nwekwara nachträglichh na anyị n'otu n'otu. Mgbe Austria anyị anapụta kpọmkwem site anyị mmepụta.
N'ihi na ime ụlọ nwụnye, anyị nwere ike ikwu anyị imanye nammiri barrels / Ofuro si Canada-acha ọbara ọbara osisi sida na-ugbua dị site 120cm n'obosara na ma site na elu nke 92cm. Nke a osisi kwesịrị ekwesị ka ime ụlọ iji, ebe o nwere naanị obere shrinkage omume na otú saa ma ọ bụ sawụna jụrụ ọdọ mmiri mgbe anaghị eji nso.
Anyị zitere unu anyị Euro ndepụta ọnụahịa site na e-mail gị.
18. May 2014 na 15:26
Wir sind auf der Suche nach einem Holzfass mit ofen (n'èzí).
Biko zitere anyị a tụrụ aro ndepụta ọnụahịa.
18. May 2014 na 15:31
Daalụ maka ajụjụ gị. Anyị nwere dịgasị iche iche nke bat barrels na n'èzí n'ekwú – si dị ọnụ ala na-ekewa.
Biko lelee gị e-mail, achọrọ akwụkwọ e zitere gị.